Chii chinonzi AirDrop uye kuti ungawana sei zvakanyanya kubva pazviri | Nhau dze iPhone
Chii chinonzi AirDrop uye kuti ungawana sei zvakanyanya kubva mazviri
Ignatius Room | | Apple zvigadzirwa, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kana uchangobva kuburitsa itsva iPhone kana iPad, zvimwe wakazvibvunza chii chinonzi mhepo drop. Zvingangodaro kuti iwe uchangobva kuona kushanda uku pa iPhone, iPad kana Mac yako. Ngazvive zvakadaro, muchinyorwa chino tichazopindura mibvunzo yese yaunayo pamusoro peiyi tekinoroji yeApple.
1 Chii chinonzi AirDrop?
2 AirDrop Inoenderana Zvishandiso
3 Iko mafaera akagovaniswa kuburikidza neAirDrop anochengetwa
4 Imhando ipi yemafaira anogona kutumirwa neAirDrop
5 Maitiro ekuseta AirDrop pa iPhone
6 Maitiro ekuseta AirDrop paMac
7 Dzimwe nzira dzeAirDrop yeWindows
AirDrop iApple proprietary communication protocol inobvumira zvese zvishandiso zvinotungamirirwa neIOS, iPadOS uye macOS kugovera chero rudzi rwefaira nemumwe pasina chikonzero chekushandisa internet yekubatanidza chero iwe uri pedyo.
Iyo AirDrop protocol inoshandisa Wi-Fi uye Bluetooth kubatana zvishandiso, saka zvese zviri zviviri zvinoda kubatidzwa kuitira kugovera zvirimo kuburikidza neAirDrop.
Iyo Cupertino-yakavakirwa kambani yakazivisa tekinoroji iyi muna 2011, zvisinei, haina kugumira kumidziyo yakaburitswa neApple kubva zuva iroro, sezvo ichiwanikwawo pamidziyo yekare, seMacBooks kubva muna 2008 zvichienda mberi.
Apple inotibvumira kugadzirisa AirDrop kuti kuderedza nhamba yevanhu vakatipoteredza ndiani anogona kutitumira mafaera: munhu wese, vanobatika chete kana vakaremara.
AirDrop Inoenderana Zvishandiso
AirDrop inowanikwa muIOS 7 pamidziyo inotevera, asi chete govana zvemukati nemamwe ma iOS zvishandiso:
iPhone 5 kana gare gare
iPad 4th chizvarwa uye gare gare
iPad Pro 1st chizvarwa uye gare gare
iPad Mini 1st chizvarwa uye gare gare
iPod Touch 5th chizvarwa uye gare gare
AirDrop protocol inowanikwa kugovera mafaera pakati peMacs Kutanga neOS X 7.0 Shumba nemakomputa:
Mac Mini kubva pakati pe2010 uye gare gare
Mac Pro kubva kutanga kwa2009 ine AirPort Yakanyanya kadhi uye modhi kubva pakati pa2010 uye gare gare.
Yese MacBook Pro modhi mushure me2008 kunze kweiyo 17-inch MacBook Pro.
MacBook Air mushure me2010 uye gare gare.
MacBooks akaburitswa mushure me2008 kana nyowani kusasanganisa chena MacBook
iMac kubva kutanga kwa2009 uye gare gare
Kana iwe iPhone inotungamirirwa neIOS 8 kana kuti gare gare uye Mac yako inotungamirirwa ne OS X 10.0 Yosemite kana kuti gare gare, unogona kugovera zvirimo pakati pe iPhone, iPad, iPod touch, Mac, uye zvichipesana pakati pezvishandiso zvinotevera:
iPhone: iPhone 5 uye gare gare
iPad: iPad 4th chizvarwa uye gare gare
iPad Pro: iPad Pro 1st chizvarwa uye gare gare
iPad Mini: iPad Mini 1st chizvarwa uye gare gare
iPod Touch: iPod Bata 5th chizvarwa uye gare gare
MacBook Air yepakati 2012 uye nyowani
MacBook Pro kubva pakati 2012 uye gare gare
iMacs kubva pakati pe2012 uye gare gare
Mac Mini kubva pakati pe2012 uye gare gare
Mac Pro kubva pakati pe2013 uye gare gare
Iko mafaera akagovaniswa kuburikidza neAirDrop anochengetwa
Zvichienderana nefomati yemafaira izvo zvatinogashira pa iPhone, iPad uye iPod touch, izvi zvichachengetwa mune imwe application kana imwe:
Mifananidzo nemavhidhiyo: Kana isu tikagamuchira ese mafoto nemavhidhiyo akarekodhwa ne iPhone, anozochengetwa otomatiki muMapikicha application.
Vhidhiyo: Kana ari mavhidhiyo ari mufomati isingaenderane neIOS, iOS haizoziva iyo fomati uye ichatibvunza kuti ndeipi application yatinoda kuivhura.
Archives: Kana iOS isingakwanise kubatanidza iyo faira yekuwedzera kune yemuno application, ichatiratidza runyoro rwemaapplication ekuchengetedza iyo faira kuti ivhure gare gare.
Webhu zvinongedzo: Kana tikagovana webhusaiti, iOS inongovhura iyo link neiyo default browser yatakaisa pachishandiso chedu.
Kana tikagovana faira kubva pa iPhone kuenda kuMac kana pakati peMacs, komputa ichaita chimwe chiito kana chimwe zvichienderana nerudzi rwefaira rakagovaniswa.
Archives. Pasinei nerudzi rwefaira, macOS inochengeta iyo faira zvakananga mudhawunirodha folda. Izvo hazvina basa kana ari mafoto, mavhidhiyo, zvinyorwa zvinyorwa ...
Webhu zvinongedzo. Kana zvasvika kune webhu zvinongedzo, macOS inongovhura iyo link mukombuta yako default browser.
Imhando ipi yemafaira anogona kutumirwa neAirDrop
AirDrop inotibvumira govera chero chimiro chefaira pakati pemidziyo inotungamirirwa neIOS, iPadOS uye macOS. Izvo hazvina basa kana komputa yekuenda isina application inoenderana yekuivhura.
Apple inoti izvozvo hapana muganho mukuru wenzvimbo yefaira kuitumira kuburikidza neAirDrop. Nekudaro, kana saizi yakakura kwazvo, zvinodarika mukana wekuti iOS mudziyo unorara uye skrini inodzima.
Kana izvi zvikaitika, kutamisa kuchakanganiswa. Kushandisa AirDrop kutumira mafaira makuru evhidhiyo hakukurudzirwe. Muzviitiko izvi, zviri nani kushandisa imwe yesarudzo dzatinokuratidza mune chimwe chinyorwa chatakadzidzisa kutamisa mafoto kubva kuphone kuenda kuMac.
Maitiro ekuseta AirDrop pa iPhone
Kuisa izvo vanhu vanogona kutitumira mafaera kuburikidza neiyo AirDrop protocol pa iPhone, isu tinofanirwa kutevedzera iwo matanho andinotsanangura pazasi:
Isu tinowana iyo control panel nekutsvedza chigunwe chako kubva kune kumusoro kurudyi kwekrini.
Tinodzvanya uye bata pasi Wi-Fi icon.
Ipapo dzvanya uye ubate iyo AirDrop.
Pakupedzisira, Isu tinosarudza modhi zvinonyatsoenderana nezvido zvedu.
Maitiro ekuseta AirDrop paMac
Kugadzirisa izvo vanhu vanogona titumire mafaera kuburikidza neiyo AirDrop protocol paMac, isu tinofanirwa kutevedzera matanho andinonyora pazasi:
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita ndeche ratidza iyo AirDrop icon mune yepamusoro menyu bar. Kuti tidaro, tinofanira kuita nhanho dzandinokuratidza pazasi:
Tinopinda Zvido zvemaitiro.
Mukati meSystem Preferences, tinya pa Dock uye menyu bar.
Tevere, mukoramu yekuruboshwe, tinya pa AirDrop.
Muchikamu chekurudyi, tarisa bhokisi Ratidza mune menyu bar.
Kuita kuti AirDrop uye ganhurira iyo vashandisi vanogona kutitumira mafaera, tinya pane icon mubhari yemenyu uye:
We uncheck switch kudzima AirDrop.
Tinosarudza Contacts chete o zvose.
Dzimwe nzira dzeAirDrop yeWindows
Sezvandambotaura pakutanga kwechinyorwa chino, iyo AirDrop protocol inongowanikwa muapuro chete, saka haisi kuwanikwa pane chero imwe puratifomu.
Imwe yei nzira dzakanakisa dzeAirDrop yeWindows uye kuti, mukuwedzera, inowanikwawo kune Android, iAirDroid, chishandiso chemahara chinoshanda kuburikidza newebhu bhurawuza uye ine application yeWindows.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Chii chinonzi AirDrop uye kuti ungawana sei zvakanyanya kubva mazviri
Iyo "Chinja kuAndroid" app inopinza data rako kubva kuCloud kuenda kuGoogle Mapikicha
Apple Zvitoro uye vagadziri vane mvumo havagadzirise iPhone yakabiwa